Mujaahidiinta Dalka Maali Oo Saldhig Ciidan La Wareegay. – Calamada.com
Mujaahidiinta Dalka Maali Oo Saldhig Ciidan La Wareegay.
calamada July 20, 2016 2 min read
Mujaahidiinta Xarakada Anaaru Diin ee Dalka Maali ayaa maalintii Talaadada ee shalay waxay weerar ballaaran ku qaadeen Saldhig Meliteri oo Ciidamada Dowladda daba dhilifka ee dalkaas ay ku lahaayeen magaalada lagu magacaabo Nampala oo qiyaastii 500 km u jirta magaalada Caasimadda ah ee Bamako.
Sida lagu sheegay Qoraal kooban oo barta Twitterka ay ku faafisay Muâ€™assasada Rimaax ee garabka Warbaahineed ee Xarakada Ansaaru Diin waxaa howl-galkaasi qaaday Katiibada lagu magacaabo Masiinaa ee taabacsan Xarakada Ansaar Diin ,iyadoona halkaas uu ka dhacay dagaal culus oo saacado badan qaatay, kaasi oo ugu dambeyntii keenay Â in Mujaahidiintu ay si buuxda ula wareegaan Saldhigga.
Xarakada Ansaaru Diin waxay sheegtay in howl-galkaasi ay ku dishay tobaneeyo Askari oo ka tirsanaa Ciidamada Dowladda daba dhilifka ah ee Maali, waxay sidoo kale sheegtay inay kula wareegtay hubkii iyo Saanaddii Xeradaasi dhexyaallay, islamarkaana la gubay gaadiid iyo agabka kale oo Meliteri.
Saraakiil u hadlay Dowladda Maali ayaa qirtay in Ciidamadooda si xun loogu jebiyay dagaalkii ka dhacay magaalada Nampala, waxayna xaqiijiyeen in Saldhigga Meliteri ee magaaladaasi kuyaalla ay si buuxda ula wareegeen Mujaahidiinta ka hor inta aysan halkaasi ka bixin kadib markii ay ka rarteen Saanaddii Meliteri ee halkaasi ay kasoo ghamiineysteen.
Gudoomiyaha degmada Diyaabaali ee u dhow magaalada Nampala Cusmaan Diyaalo ayaa yiri : â€œ Ciidamadu waxay isku uruursanayaan magaalada Diyaabaali, si ay u qaadaan weerar rogaal celis ah oo ay ku doonayaan inay dib ugula wareegaan Saldhigga laga qabsadayâ€.
Weerarkan ballaaran ee Xarakada Ansaaru Diin ay ku qaadday magaalada Nampala ee Dalka Maali waxa uu imaanayaa xilli todobaadyadii lasoo dhaafay ay Mujaahidiinta ka dagaallama dalkaasi sii xoojiyeen howl-gallada iyo weerarrada ay ku qaadaan Ciidamada Isbaheystay ee ku duulay dalkaasi iyo Ciidamada daacadda u ah Maamulka daba dhilifka ee ka taliya Dalka Maali.
Previous: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 15-10-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 15-10-1437 Hijri.